सहनशील शहर – anbika giri
देशको राजधानी र राजनीतिको केन्द्र भएकाले काठमाडौंसँग आम नेपालीका धेरै अपेक्षाहरू छन्। देशमा विकास नभएको कारण नै काठमाडौं हो भन्नेहरूको जमात पनि ठूलै छ। हुन पनि, मेची–महाकालीको भाग्यको निर्णय अझै काठमाडौंको हातमा छ। यो मेसोमा काठमाडौंले खेप्नुपरेको भीषण संवेगहरूको एकोहोरो प्रहार भने कृतघ्नताको तहसम्म नाजायज हुन पुगेको छ। मुलुकको केन्द्रीय राजनीतिको थलो हुनु भनेको अरू शहर जस्तो नहुनु अथवा कृतज्ञताको अपेक्षा गर्ने अधिकार गुमाउनु होइन। सोचौं त, जीवनवृत्तिका लागि हामी बसेर त्यसैको बदख्वाइँ गरेको शहर काठमाडौं बाहेकका परेको भए त्यो सम्भव हुन्थ्यो होला?
काठमाडौंले रैथाने बाहेक म र तपाईंजस्ता अनेक पढाइ वा अरू बहानामा छिरेर नफर्केका लाखौंलाई धानिरहेको छ। हामी यहाँ वर्षौंदेखि बसिराखेका छौं, र पनि काठमाडौंलाई आफ्नो मान्दैनौं। सडकमा पिच्च–पिच्च थुक्दै हिंड्छौ, किनकि यो हाम्रो शहर होइन। साँझ्–बिहान खोलामा फोहोर फाल्छौं, किनकि यी हाम्रा होइनन्। अरू त अरू, केही वर्षअघि खाली हात राजधानी छिरेर बंगला र स्पोर्टस् युटिलिटी भेइकल (एसयुभी) जोडेकाहरू समेत त्यही सोचिरहेछन्, गरिरहेछन्।
यो शहर हो, जोसँग हामीलाई अलमल्याउने, बहकाउने धेरै थोक छ। त्यो त हरेक शहरसँग हुन्छ। काठमाडौंमा हामी यही कारण रमाएका छौं। हामीलाई बूढा बाआमालाई गाउँमा छाडेर कुनै पनि हालतमा यहीं बस्नुछ, यही शहरमा भविष्य बनाउनु छ, कम्तीमा एउटा घर बनाउनुछ। काठमाडौं बाहेकका नेपाली शहरका स्कूल, क्याम्पस वा अस्पतालहरूमा हाम्रो विश्वासै नभएकाले हामी यहाँ थुप्रिएका छौं। अरू शहरमा भन्दा यहाँ हामी बढी रचनात्मक र मुखर हुन सक्छौं। हामीलाई काठमाडौंले जानी–जानी हाम्रो धारासम्म पानी नपुर्‍याएको, धूलो उडाएको जस्तो लाग्छ। यो पनि लाग्छ कि हामीलाई काठमाडौंले नै सडकमा फोहोर फाल्न सिकाएको हो। यो शहरको राजनीतिले पारेको सेपको तुष हामीमा बढी नै छ, शायद।
आफू बसेको शहरप्रति हाम्रो दायित्व चाहिं हुन्छ कि हुँदैन? यो शहर दुर्गन्धित हुँदा मास्क लगाएको मुखले गाली गर्दै हिंड्ने कि सरसफाइमा जुट्ने? आफू पनि नियममा बस्ने कि बेथिति भएको दोष काठमाडौंलाई नै दिइरहने? काठमाडौंमा हामी खुशी हुन सक्दैनौं भने घर फर्कने विकल्प खुल्ला छ। आजभोलि गाउँमा खेतबारी बाँझै हुन थालेका छन्। हामी थपक्क गाउँ नफर्की राजधानीमै टाँसिनु काठमाडौंको बाध्यता हो र?
(यो लेख हिमाल खबर पत्रिकमा प्रकाशित भएको हो )
Author AnbikaPosted on December 17, 2012 Categories Uncategorized
One thought on “सहनशील शहर”
wowow great one ur always perfect
Previous Previous post: राजनीतिक रोगीको ‘दिल्ली उपचार’
Next Next post: के भा’को हामीलाई!